Fironana mikorakoraka any Shina: ny mangahazo sy ny saosy masaka no isan'ny fanirian-daza fatratra, sokajy Dada Group - Potatoes News
Alatsinainy, Septambra 27, 2021
Fironana fihinanan-tsakafo any Shina: tsiro mangaha sy sauerkraut eo amin'ireo faniriana fatratra, manasongadina ny Dada Group
Ny Dada Group, miasa ny sehatra JDDJ fandefasana entana an-tsitrapo sinoa, dia manasongadina ny safidin'ny fiantsenana any Shina ankehitriny, izay miainga amin'ny sôkôla misy tsiro mangaha ka hatramin'ny ovy omena ovy.
Ny fahitana ny fironana ara-toekarena ilain'ny sakafo snack any Shina farany dia aseho ao amin'ny Tatitry ny orinasa momba ny fironana mihinana amin'ny sakafo azo avy amin'ny sakafo mangatsiaka, miorina amin'ny angon-drakitra lehibe JDDJ, traikefa an-tserasera sy ivelany ary fiaraha-miasa akaiky amin'ny PepsiCo Food .
Rehefa mihabetsaka ny olona mandray ny fanjifana amin'ny fangatahana, JDDJ dia nahatsikaritra ny fitomboana haingana amin'ny sokajy sakafo sakafom-bahana. Ny tsakitsaky gourmet, indrindra indrindra, dia malaza noho ny serivisy fanaterana adiny iray maharitra an-tsehatra. Ny poti-ovy sy ny patsa misy ny masiaka no nasongadiny ho sakafom-bolo ankafizina hohanina isan'andro, ary boaty fanomezana sôkôla no be mpitia indrindra mandritra ny fety.
Mihinana fanamaivanana ny aretin-tsaina
Araka ny tatitra nataony, ny JDDJ dia nanatri-maso ny fivarotana snack dia nitombo tamin'ny 91 isan-jato tamin'ny taona 2020. Ny sakafo misy mofomamy, sôkôla ary biskoitra no sokajy telo malaza indrindra amin'ny sehatra. Mandritra izany fotoana izany, wafers, betsaka sakafo ary ny sôkôla dia nahita ny fiakarana haingana indrindra isan-taona.
Ao anatin'ny areti-mandringana COVID-19 dia mihamitombo hatrany ny mpanjifa no mivadika amin'ny sehatra fivarotana antsinjarany izay ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'izy ireo sakafo maivana. Ny serivisy fivarotana lehibe an-tserasera dia mitentina 80 isanjaton'ny varotra snack JDDJ.
Fiaraha-miasa amin'ny marika lehibe
Tamin'ny volana aprily 2020, nandritra ny fampielezan-kevitra momba ny varotra fialan-tsasatra natombok'i JDDJ sy i PepsiCo Foods, ny marika snack mpandray anjara dia nahitana fiakarana 220 isan-jato tamin'ny varotra raha oharina tamin'ny vanim-potoana teo aloha.
Tamin'ny volana aogositra 2020, JDDJ dia niara-niasa tamin'i Yili, P&G, Mars Wrigley ary Mondelēz hitazona ny hetsika marketing Super Fan Day manokana. Ny totalin'ny varotra marika mpandray anjara dia nahitana fitomboana intelo isan-taona ny fitomboana. Mikasika ny marketing nomerika, ny sehatra dia manomboka sy miasa andiany IP marketing, toy ny "Super Brand Day" sy "Supermarket Brand Season", hampiroborobo ny fitomboan'ny varotra.
Tags: ShinaSnackingny fironana
Manantena ny manam-pahaizana fa ny vokatra ovy Maine avo lenta
Fampivoarana ovy any Iran
HZPC faly tamin'ny fahazoana ny vokatra SolEye avy amin'ny RMA-Techniek
Septambra 26, 2021
Ny ronono ovy ve no safidy maharitra maharitra ronono?
Manoro hevitra ireo mpamboly ovy ny momba ny fanadiovana ny vokatra alohan'ny fitehirizana
Ny Index Index ny vidin'ny sakafo FAO dia nihemotra haingana tamin'ny volana Aogositra
MANUFACTURER SNACK ITALIA MIFIDY VAHAOLANA MIARAKA AMIN'NY TNA
6 taona lasa izay
Ny fihinanana ovy adolantsento amerikana, mifandraika amin'ny kalitaon'ny sakafo avo kokoa